Filtrer les éléments par date : dimanche, 17 mai 2020
dimanche, 17 mai 2020 21:33
Andry Rajoelina: Hanokatra toeram-pitiliana manokana sy hanangana orinasa famokarana fanafody
Roa volana izao no niatrehan’i Madagasikara ny ady amin’ny valanaretina Coronavirus. Notsiahivin’ny filoha Andry Rajoelina tamin’ny kabary nataony ho an’ny Vahoaka Malagasy androany, izay naharitra 20 minitra teo, ireo fanapahan-kevitra sy fepetra ary vokatra azo isaky ny dingana natao tao anatin’izay fe-potoana izay.
Tsy mbola vita ny ady, nefa misy ny gaboraraka teo amin’ny fanajana ny fepetra hoy ny filoha, hany ka vokatr’izay dia lasa foiben’ny aretina Covid-19 izao i Toamasina, izay ahitana taha avo indrindra. Hentitra ny fitondram-panjakana manoloana izany, ny amin’ny tsy maintsy hanarahana ny fepetra amin’ny Fahamehana ara-pahasalamana mba tsy hianahan’ity valanaretina ity eto Madagasikara. Nambarany fa tsy nisotro ilay Tambavy CVO ireo olona vaovao rehetra voan’ny Covid-19.
dimanche, 17 mai 2020 20:02
Manamisoa – Ambalavao: Mpandeha taksiborosy tratra nitondra basy
Basy lava « Carabine » nafenina tao anaty gony, io no tratra nandritra ny fisavana entan’ny mpandeha iray nandeha taksiborosy hiazo an’i Fianarantsoa teo amin’ny « barrage sanitaire » teo Vohiboay Kaominina Manamisoa, Distrika Ambalavao. Ny fihetsiny mahamahana no nisarika ny zandary hanao fisavana lalindalina kokoa hatrany amin’ny entan’ny mpandeha ka nahitana ity basy ity.
Notazomina natao famotorana avy hatrany ilay mpandeha sy ny basy nentiny.
dimanche, 17 mai 2020 19:14
Andoharano - Ambovombe Androy: Dahalo iray maty voatifitra, tafaverina amin’ny tompony ny omby miisa 70
Nitrangana halatr’omby tao Ankiliroa Kaominina Andoharano, Distrika Ambovombe Androy ny alin’ny alakamisy 14 may 2020. Omby miisa 70 no lasan’ny dahalo. Roso tamin’ny fanarahan-dia avy hatrany ny Fokonolona sy ny Zandary io alina io, ary niambina ny kizo tao Andoharano.
Nisy ny fifandonana tao anaty haizina, rehefa nifankatratra ny dahalo sy ny mpanara-dia, alohan’ny hahatongavana tao Andoharano. Nifamaliana ny tifitra teo amin’ny andian-dahalo andaniny sy ny Zandary ankilany. Maty voatifitra tao anatin’izany ny iray tamin’ireo dahalo ary rifatra nitsoaka ireo namany.
Azo avokoa ny omby rehetra ary efa tafaverina amin’ny tompony.
dimanche, 17 mai 2020 18:50
Anosiala – Ambohidratrimo: Jiolahy manao fanamiana zandary nanafika kamiao, lasan’izy ireo ny 30 tapitrisa Ariary
Kamiao iray avy any Ankazobe hiazo an’Antananarivo no notafihin’ny jiolahy mitam-basy teo Tsaramandroso Namontana, Kaominina Anosiala Distrika Ambohidratrimo ny marainan’ny zoma 15 may 2020. Ny tompony ihany no namily ny fiara ; tao anatiny ny vadiny niampy mpiasa roa hafa.
Lehilahy roa, nanao fanamiana sy « béret » fitondran’ny zandary nanao « auto-stop » an’ity kamiao ity rehefa nandalo tao Mahitsy, lalam-pirenena faha-4 ary niangavy mba hoentina hiazo an’Antananarivo. Tsy niahiahy na nanana eritreritra hafa tamin’izy ireo ny mpamily fa nakarina ary nentin’ilay kamiao ihany koa izy ireo.
dimanche, 17 mai 2020 15:26
Fanararaotam-pahefana miaro hosoka: Tazomina am-ponja vonjimaika ny solontenam-paritra ny ATT Vakinankaratra-Menabe
Olona roa, anisany ny solontenam-paritra ny ATT Vakinankaratra-Menabe no voarohirohy amina fanararaotam-pahefana sy fanaovana hosoka ary ady tombontsoa amin’ny fanomezana fahazoan-dalana fiara hivezivezy ao anatin’izao fotoanan'ny fihibohana izao, mandika ny lalàna mihatra amin’izao Fahamehana ara-pahasalamana izao.
Natolotra ny Pôle Anti-Corruption Antananarivo ny raharaha taorian’ny famotorana nataon’ny Zandary.
Tazomina am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjan’Antsirabe ireo olona roa ireo taorian’izay.
dimanche, 17 mai 2020 15:03
Toamasina: Nampiato indray ny fampianarana ny Sekoly Katolika
Niato nanomboka ny 15 may 2020 ny fampianarana amin’ny sekoly Katolika rehetra eto Toamasina tampon-tanàna, araka ny fanambarana nataon’ny CDEEC/DIDEC manoloana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Misokatra tapakandro kosa ny birao, ahafahan’ny ray aman-dreny maka fanazarana ho an’ny mpianatra, izay omanin’ny mpampianatra azy ireo.
Tsy mbola voafaritra ny fotoana hiverenan’ny fampianarana amin’ny Sekoly Katolika eto Toamasina.
dimanche, 17 mai 2020 14:46
Jiolahy mitam-piadiana: Maty voatifitra i Toho Brown, nanafika "cash point" tetsy Nanisana
Roa andro taorian'ny fanafihana cash-point nisy tetsy Nanisana ny Zoma 15 Mey lasa teo dia lavon'ny balan'ny Polisy tetsy Ambohijanaka ny iray tamin'ireo jiolahy nanao ilay fanafihana izay fantatra amin'ny anarana hoe "Tovo Brown".
Tao anatin'ny famotorana no nahalalana fa eny Ambohijanaka (Lohanosy) no misy ity jiolahy ity ary nidina teny an-toerana avy hatrany ny Polisy. Vao nahita ny mpitandro ny filaminana i Tovo Brown dia nitifitra avy hatrany ka teo no nisy ny fifampitifirana teo aminy sy ny Polisy ary nitarika ny fahafatesany.
Isan'ireo jiolahy mpanao fanafihana mahery vaika eto an-drenivohitra i Tovo Brown, isany izany ny cash-point tetsy Ampasampito, Grossiste FOFIFA, famonoana olona tao anatin'ny fiara sprinter tetsy Malaza, fanafihana mitam-piadiana teny Ambohijanaka sy ireo fanafihana hafa nahavoatonona azy.
17 mai: Journée internationale contre l'homophobie
17 mai: Journée internationale contre l'homophobie.
dimanche, 17 mai 2020 14:41
17 mai: Journée Mondiale contre l'hypertension.